Imozulu, Imozulu, Iindawo zexesha | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: Imozulu, iMozulu, iiNkalo zexesha
Uphi ummandla wentlango eRashiya?
Uphi ummandla wentlango obekwe eRashiya? Archedinsko-Don sands zibekwe kummandla Serafimovichsky kunye Frolovsky izithili kummandla Volgograd. Ummandla weesanti ze-Achredinsko-Don malunga namawaka angamahektare angama-200. Tsimlyansk Sands zibekwe kwi ...
Ziziphi iindawo zelizwe lethu kunye nokuba kutheni iintlekele zemvelo? Ziziphi iindlela zokulwa nazo?
Zeziphi iindawo zelizwe lethu kwaye kutheni iintlekele zendalo zivela? manyathelo mani okulwa nawo? Kwiminyaka emininzi eyadlulayo, xa amazwe afana ne-America, i-Russia, i-China, i-Ngilani befumana amandla ...
Kuwuphi umzi waseRashiya kungekho ubusika?
Sisiphi isixeko saseRashiya apho kungekho busika? Ummandla onemozulu efudumeleyo eRussia ngasemazantsi eKrasnodar Territory - ngakumbi iSochi. Ke, apho umndilili ubushushu bonyaka yi-14,2 C Umndilili weqondo lobushushu ...
Yintoni imimoya eNgilandi?
Ithini imozulu eNgilane? Kumanzi kwaye kuyabanda Kulwandlekazi oluphakathi, oluthambileyo nolumanzi. Imozulu ikakhulu yenziwe lulwandle olufudumeleyo lwangoku lweGulf Stream. Eyona nyanga ibanda kakhulu nguJanuwari (ukusuka +3 C ukuya ku ...
Iyintoni imozulu ngoJanuwari, Februwari eYiputa? Okhe kungcono nini ukuqhuba?
Ithini imozulu ngoJanuwari, Februwari eYiphutha? Okanye leliphi elona xesha lokuhamba? Ukuphumla eYiputa ngo-DISEMBA Ukusukela nge-1 ukuya kuma-20 ku-Disemba e-Egypt-ixesha lokuphumla. Amaxabiso aphantsi kakhulu, iihotele ...
Nceda uncede uchaze icebo le-Australia
Nceda uncede ekuchazeni ukukhululeka kwe-Australia ngokwesi sicwangciso i-Australia yenye yezona zinkulu kule ndawo. Olunye lweempawu zendalo kukuxhaphaka kokuvela kweentlango. Ilizwe lityebile kwiintlobo ezininzi zobutyebi bendalo, ...
indlela yokukrazula ama-acne stains
indlela yokuphelisa amabala amabala Kuyimfuneko ukuba uqhagamshelane nogqirha wesikhumba. iiresiphi nge-badyagi ... umhlobo wam ubancoma kakhulu. zininzi zazo kwi-Intanethi, ke ngoko ngena kukhangelo "lweendlela zokupheka ezine-badag" ukuba ingxaki izithambiso, iyakunceda ...
Zingaphi iiyure umehluko phakathi kweMoscow neVorkuta?
Zingaphi iiyure umahluko phakathi kweMoscow neVorkuta? EVorkuta bahlala ngokwexesha laseMoscow. Ezi zixeko zahlulwe yimimandla yamaxesha ama-3: ukuba eMoscow ngu-12.00, emva koko eVorkuta - 15.00. Ixesha…
Andiqondi ukuba yintoni ikhephu elinzima. Ndiyifunde kwi-intanethi - ayicacanga.
Andiqondi ukuba yintoni ikhephu elinzima. Ndiyifunde kwi-intanethi - ayicacanga. Kutheni ukopa yonke into ukusuka kwiWikipedia. Indoda, nangona kunjalo, yathi ayibhalwanga ngokucacileyo Imvula yekhephu ...
Uphi umthombo we-tabol yomlambo
uphi umthombo womlambo iThabol V K azakhstan kwingingqi yaseKustanai. Eyona milambo inkulu kulo mlambo zezi: Uy, Iset, Tura, Tavda, Ubagan. Umthombo woMlambo i-TOBOL ulele kumda wezinto ezisempuma ze-Urals eseMazantsi ...
Lixesha lini eFransi, eParis?
Liliphi ixesha eParis, eFrance? ngoku 16:13 Kodwa baphendula ngamaxesha ahlukeneyo! Isidenge. Iiyure ezi-2 zingaphantsi kuneMoscow http://www.timeanddate.com/worldclock/full.html http://logic-bratsk.ru/term/pogoda.php?key=p8 Ixesha elichanekileyo ngoku ungajonga ...
Uyazi ukuba yiphi ikhalenda esiphila kuyo ngoku? Ziziphi iikhalenda owaziyo?
Ngaba uyazi ukuba yeyiphi ikhalenda esiphila kuyo ngoku? Ziziphi iikhalenda osaziyo? Ngoku siphila ngokwekhalenda kaJulian (isimbo esitsha), ngaphambi kohlaziyo esasihlala ngalo ngokweGregory (isitayile sakudala) ...
Unokubala njani ubukhulu beenyanga?
Ukubala njani ukuphakama kwenyanga? Nantsi yonke into ikumanqanaba: Unokubala ubungakanani beqondo lobushushu bemihla ngemihla ngokwakho. Thatha imilinganiselo efunekayo. Izikhululo zemozulu zihlala zilinganisa iqondo lobushushu lomoya ngaphandle amaxesha asibhozo ngemini, oko kukuthi ...
ukushisa kumazantsi kunye nasentla
iqondo lobushushu emazantsi nasemantla epali kumazantsi epali ubushushu obuphakathi -45- -60 degrees, emazantsi- 60-80 degrees. Ndazi ngokuthe ngqo ubushushu obujikeleze iSouth Pole ...
Uphi ubusuku obumnyama? Usuku lwe polar? Ubusuku obumhlophe? Zihluke njani komnye nomnye? Yonke nini na ikuphi eRashiya?
Buyintoni Ubusuku Bendawo Usuku lwepolar? Ubusuku obuMhlophe? Bahluke njani omnye komnye? Nini kwaye phi yonke le nto eRashiya? Uphendlo lukaGoogle "usuku lwepolar", "ubusuku bendawo", "ubusuku obumhlophe" ...
Abantu bandinceda ukugcwalisa itafile yejografi ...
Abantu bandincede ndigcwalise itafile kwijografi ... dima kwaye shit kwaye unokwazi, ewe, kuya kufuneka unike intloko entlokweni yakho. Imozulu, iqondo lobushushu, njl njl.
ukubonakalisa iindawo ze-climo eziphantsi komhlaba kunye nezifudumele.
Ukuchaza iindawo ezinemozulu ezifudumeleyo nezinemozulu epholileyo., Ngegama, phola! + Iitropiki - indawo yemozulu yoMhlaba. Iitropiki zibekwe phakathi kwetropiki kwiikhweyitha kunye nobushushu obuphakathi, oko kukuthi, malunga ...
ubusika obuqhelekileyo kunye namaqondo okushisa ehlobo eAfrika
Amaqondo obushushu ebusika kunye nehlobo e-Afrika.I-Afrika lelona lizwekazi lishushu kwihlabathi. Ime ikakhulu kwimimandla yeetropiki kunye neikhweyitha, kwaye ke ifumana inani elikhulu lemitha yelanga (emantla ...
I-Titanic yazama kuphi?
I-Titanic itshone phi? Ngo-Epreli 4, 1912, malunga ezinzulwini zobusuku kuLwandlekazi lweAtlantic, iikhilomitha ezingamakhulu amathathu kumzantsi-mpuma weSiqithi saseNewfoundland, mhlawumbi enye yeentlekele zolwandle ezinkulu ...
Yintoni imozulu eKrasnodar ebusika ???
Ithini imo yezulu yaseKrasnodar ebusika ??? Luhlobo luni lwedatha? Nokuba akathembekanga kangako? Bafundi, wakhe waya eKrasnodar? Ebusika sino -8 -10 ??? Kwakunini oko? Iqondo liphantsi kakhulu! ...
Imibuzo ye-56 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-1,536.